Tar Ujongilanga Tarot | Ukusasazeka kweTarot yeNgcali | 2019
Okwangoku awuzazi izibonelelo zikaSunflower Tarot? Nangona ufikile apha, ndiqinisekile ukuba sele undazi kwividiyo nakwitshaneli yam ye-YouTube engaphezulu Ababhalisi be210.000.
Kulo Oojongilanga Tarot Eyona njongo yokufunda kunye Ukufundwa kwamakhadi kuyanyanga, ngeengcebiso ezibalulekileyo eziza kukunceda ulawule ubomi bakho. Uya kuhlala ungumnini wobomi bakho kunye nezigqibo zakho, ungavumeli mntu athethe into ekufuneka uyenzile, fumana isimilo eso hlala ngaphakathi kobukho bakho kwaye uziphakamisele emhlabeni ngomphefumlo wakho omtsha.
[iarbital_cluster tag = »3 ″ order =» DESC »]
1 Yintoni efundwayo ngokufundwa kwethanga likajongilanga?
2 Iividiyo zetototilisilophu ebonwa kakhulu
3 Ngaba uya kohlukana neqabane lakho langoku?
4 Ujongilanga Tarot 2019-Septemba Zonke iihoroscopes
4.1 Unokuba nomdla kwezi ntlobo zetarot
Yintoni efundwayo ngokufundwa kwethanga likajongilanga?
Injongo yile yenza ikhadi lenyanga libalekeNgokukodwa kwiinyanga:
NgoJanuwari 2020, ngoFebruwari 2020, ngoMatshi 2020, ngo-Epreli 2020, ngoMeyi 2020, ngoJuni 2020, ngoJulayi 2020, nge-Agasti 2020, ngoSeptemba 2020, ngo-Okthobha 2019, ngoNovemba 2019 nangoDisemba 2019
Ukongeza, ukusebenzisa amakhadi ngendlela engaqhelekanga yoku dlala amakhadi ngokuxhomekeke kuphawu lwakho lweenkwenkwezi, ezi:
Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius kunye nePisces.
Iividiyo zetototilisilophu ebonwa kakhulu
Le vidiyo ibhekisa kwi- imeko yemvakalelo yomntu, kunye nombuzo Kuba badla ngokusikhangela baze bangasihoyi. Sihlobo, bukela ividiyo ukuba uziva uchongiwe. Emazantsi eli phepha ufundele umntu i-Horoscope yenyanga kaSeptemba 2019 kwividiyo.
Ngaba uya kohlukana neqabane lakho langoku?
Ngaba kuya kufuneka uyazi ukuba loo mntu uthandana naye, kwaye utshatile okanye uneqabane, ukuba uya kuthi ngenye imini ahlukane neqabane lakhe langoku? Uhlukane nini neqabane lakho langoku? La mathandabuzo nokunye okuninzi kule vidiyo ilandelayo:
Ujongilanga Tarot 2019-Septemba Zonke iihoroscopes
Kwiividiyo ezi-3 ezilandelayo sineLibra-Gemini kunye neCapricorn
Kwiividiyo ezimbini ezilandelayo sinoSagittarius noLeo.
Kwiividiyo ezimbini ezilandelayo sinomhlaza kunye neeAries.
Kwiividiyo ezimbini ezilandelayo sineTaurus kunye neAquarius.
Kwiividiyo ezi-3 ezilandelayo sineePisces - iVirgo neScorpio
Unokuba nomdla kwezi ntlobo zetarot
Mhlawumbi unomdla wokwazi okungakumbi malunga nosuku lwakho ngemini ngoonobumba be Tarot yosuku, okanye enye into uyayithanda iisimboli kwaye uyazi iimpendulo kwimibuzo ethe ngqo ethe ngqo enkosi Iicelic runes kunye nobugcisa bakhe bokuvumisa. Nangona ufuna kuphela ukwazi ukuba kunjalo, okanye hayi, ingcebiso yethu yile tarot ewe okanye hayi, ukwazi ukuba ikhona into eza kwenzeka okanye eyenzekayo ebomini bakho, okanye eza kwenzeka.